Waa maxay farqiga u dhexeeya DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Outlook Drive Recovery? - DataNumen
Farqiga kaliya ee udhaxeeya labadan shey ayaa ah inay isticmaalaan xog ilo kala duwan, sida soo socota:
· DataNumen Outlook Repair(DOLKR) waxay uqaadaneysaa faylka PST musuqmaasuq ah ama waxyeeloobay xogta isha.
· DataNumen Outlook Drive Recovery(DODR) waxay u qaadataa darawal ama disk sida xogta isha. Darawalka ama diskigu waa meeshii aad ku keydisay faylalkaaga PST waagii hore.
Markaa haddaad gacanta ku hayso faylka PST musuq ama waxyeello gaadhay, markaa waxaad u isticmaali kartaa DOLKR inaad ku cusboonaysiiso feylka kuna soo ceshato emayllada ku jira faylka PST. Haddii DOLKR ay ku guuldareysato inay soo ceshato emaylkii la rabay, markaa wali waxaad fursad u leedahay inaad ku hesho emaylladan, adoo adeegsanaya DODR si aad u baarto wadista / diskka aad horey ugu keydisay faylka PST.
Ama haddaadan gacanta ku haynin faylka PST, tusaale ahaan, waxaad qaab u samaynaysaa diskigaaga / wadistaada oo dhan, waxaad si joogto ah uga saareysaa faylka PST, ama diskigaaga adag / wadista ayaa jaban oo ma heli kartid faylasha PST ee ku yaal, iwm. , markaa waxaad toos u isticmaali kartaa DODR.
farqiga, disk, drive, ost, pst
Maxay meydadka qaar ka mid ah farriimaha la soo helay u madhan yihiin?Waa maxay farqiga u dhexeeya DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Exchange Recovery?